थ्योरी गुड बायलाई चुम्बन गर्नुहोस्: कम्पनीहरूको पाँच लहर बानी | Martech Zone
थ्योरी गुड बायलाई चुम्बन गर्नुहोस्: कम्पनीहरूको पाँच लहर बानी
बुधबार, अप्रिल 4, 2007 मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
हिजो, मैले पढ्न सकें स्टारफिस र स्पाइडर: नेतृत्वविहीन संगठनहरूको रोक्न नसक्ने शक्ति। यदि मैले यसलाई क्रमबद्ध गर्नु पर्ने हो भने, यो १० वा बाहिर or वा be हुन सक्छ यो द्रुत पठन हो र यसको पछाडि सन्देश दुबै समयमा र अविश्वसनीय रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। सबै ईमानदारी मा, यद्यपि, यो सेतो कागज को रूप मा प्रकाशित हुन सक्छ र उही प्रभाव छ। त्यो लेखकलाई कुनै आपत्ति छैन ... यो मात्र हो कि पुस्तक खोज र पुष्टिको हो। यो कार्यको पुस्तक होइन।
बब प्रोसेनको पुस्तक, थ्योरी गुड बायलाई चुम्बन गर्नुहोस् एकदम विपरित हो। मैले यो पुस्तक लिने बित्तिकै मलाई यस्तो लाग्यो कि मैले एस्केलेटर र रकेट जहाजमा चढेको छु। म केवल परिचय मार्फत छु र त्यहाँ पहिले नै बहुमूल्य जानकारी छ। यहाँ टिजर छ - कम्पनहरू र संगठनहरू कतै कहिँ पनि छिटो नउठ्ने पाँच अपराधी बानी:
स्पष्ट दिशाहरूको अनुपस्थिति
तर्कसंगत अवर प्रदर्शन
कार्यको सट्टा योजना बनाउँदै
जोखिम र परिवर्तन गर्न Aversion
उम्म ... आउच! बबले मेरो जागिरमा मेरो बढ्दो निराशाको सारांश मात्र प्रस्तुत गर्‍यो। म एक शानदार, सफल नियोक्ताको लागि काम गर्छु जुन त्यो हो पागल जस्तै बढ्दै। अधिक कर्मचारी र पदोन्नतीहरू, यति सुस्त हामी पाउन सक्दछौं। बबलाई हाम्रो कम्पनीको बारेमा केही थाहा छैन तर उसले यसलाई पूर्णतया टाँग्यो! यी हो ठ्याक्कै ती चीजहरू जसले हामीलाई ढिला गर्दैछ कि हामीले तुरून्त परिवर्तन गर्नुपर्नेछ।
मैले यस पुस्तकका केही प्रतिलिपिहरू संगठनमा केही मानिसहरूलाई प्रदान गरें। मलाई आशा छ कि उनीहरूले यो परिचय मार्फत पनि बनाए। म यस पुस्तकको बाँकी भागमा खोल्न पर्खन सक्दिन। पुस्तकले यी अप्ठ्यारो बानीहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दैन, यसले संगठन परिवर्तन गर्न र सही दिशामा बढ्नको लागि के चाहिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ!
म निश्चित छु कि केहि हप्तामा तपाईसंग यो पुस्तकबाट तपाईसंग बाँड्न बाध्य छु। यसको प्रतिलिपि लिनुहोस् बोब प्रोसेनले थ्योरी गुड बायलाई चुम्बन गरे ताकि हामी सँगै छलफल गर्न सक्दछौं।
लेटरप्रेस, टाइपोग्राफी, र पल्प फिक्शन
WordPress: प्रकोप पुन: प्राप्ति
अप्रिल 4, 2007 मा 3: 39 PM
वाह, कम्पनी जस्तो लाग्छ म यस समयमा काम गर्दछु। यस्तो देखिन्छ कि कुनै कम्पनी एक अभिनव सानोदेखि मध्यम आकारको कम्पनीमा कर्पोरेट वातावरणको अधिकमा बढ्न थाल्छ, ती habits बानीहरू सबै सामान्य हुन जान्छ।
अप्रिल 4, 2007 मा 9: 47 PM
dang। मेरो स्थानीय पुस्तकालय यो छैन।
म १००% तपाईंसँग त्यस शीर्षमा छु। I'm म जाँदैछु "मेरो अन्तिम पोस्ट मोर्टमलाई वेवास्ता गर्नुहोस् र उही समस्याहरू दोहोर्याउनुहोस्" अहिले मेरो स्टार्टअपमा। उह।
अप्रिल 4, 2007 मा 10: 08 PM
चाखलाग्दो, engtech। हामी हाम्रो अन्तिम गल्तीहरूसँग डराउँछौं कि हामी योजना मोडमा लकवा भएका छौं। रिलीजबाट हप्ताहरू र हामी अझै सुविधाहरू र कार्यक्षमता बहस गर्दैछौं। यो स्वस्थ छैन। एक कम्पनीमा, एउटा उत्तम मालिकहरूमध्ये मैले यो कहिलेसम्म "एनालिसिस प्यारालिसिस" भनेर बोलाएको थिएँ।
कहिलेकाँही तपाईले अगाडि बढ्नु पर्छ। तपाईंको कुराको लागि, यद्यपि, तपाईं समायोजन बिना मात्र सार्न सक्नुहुन्न!
अप्रिल 5, 2007 मा 12: 04 एएम
म पढ्न मनपराउँदछु (ब्लग लेख बाहेक) म उठाउन सक्दिन र मेरो जीवन बचाउनको लागी एक किताब पुरा गर्न सक्दिन।
अप्रिल 5, 2007 मा 7: 52 एएम
पुस्तक हो मेरो रचनात्मक आउटलेट र तिनीहरू वास्तवमै मेरो कल्पनामा ट्याप गर्छन्। म सँधै उत्सुक पाठक हुँ - म प्राय: किनभने मँ मैले जे सिकेको छु लागू गर्न सक्दछु।
अवश्य पनि, रचनात्मकता सम्भवतः मैले गर्न सक्ने रोजगारहरूको लागि प्राथमिक आवश्यकता होइन (यद्यपि यो यसमा कोर हो)। तपाई पक्कै पनि दुबै शिक्षित हुनुहुन्छ र आफैलाई रचनात्मकतामा प्रशिक्षण दिइसक्नुभएको छ - त्यसैले मलाई लाग्छ कि किताब खोल्नु तपाईका लागि उत्तम स्रोत नहुन सक्छ। त्यो वास्तवमै चाखलाग्दो परिप्रेक्ष्य हो, बिट्ट! के तपाइँसँग अन्य रचनात्मक आउटलेटहरू छन्?
म of मध्ये १ पुस्तकलाई काल्पनिक बनाउन कोशिस गर्दछु ताकि मलाई नेतृत्व, प्राविधिक र मार्केटि material सामग्रीमा गाडियो। म अहिले पनी ओभरडी छु!
अप्रिल 5, 2007 मा 4: 38 एएम
हुनसक्छ तपाईले टाउको काट्नु पर्छ र हेर्नु पर्छ यदि यो मर्छ वा गर्दैन ?? ठट्टा गरेको।
अप्रिल 5, 2007 मा 7: 45 एएम
राम्रो! थोरै स्टारफिश हास्य! म डराउँछु कि टाउको काटेर निश्चय नै मारिन्छ। विडम्बनाको कुरा, यद्यपि हामीसँग यी issues मुद्दाहरूको ख्याल राख्नु छ, हेड मसँग आवश्यक परिवर्तनहरू गर्न सबैभन्दा धेरै विश्वास छ।
दुर्भाग्यवस, म वास्तवमा परिवर्तन गर्न अधिकारको स्थितिमा छैन त्यसैले यो मेरो लागि अझ गाह्रो छ। मँ फरक पार्ने कोशिश गर्दैछु, यद्यपि!